OROMOO KAN FIXAA TURE, FIXAA JIRUU FI FIXUUF JIRAATU EENYU? -
OROMOO KAN FIXAA TURE, FIXAA JIRUU FI FIXUUF JIRAATU EENYU?
Qixxeessaa Lammii | Muddee 15, 2017
Gaafilee kanaaf deebiin ulfaataa ta’uu hin danda’u. Oromoo kan fixaa ture mootummoota Habashaati. Sababaan fixaniif Oromummaa Oromiyaa irraa balleessuufi. Har’a illee kan guyya guyyaan itti jiramu kanuma. Kan ummata kana ficisiisaa turee fi ficcisiisaa jiru ammoo lammii lammooma gane, aantummaa garaa gonfateedha. Gara fuula duraafis ummata kana fixuuf kan akeeka qabu humna maqaa Itophiyaan addunyarra naannahanii wacaa jiran kana. Haala kana isaaniif anjessanii ummata isaanii ficcisiisuuf lammiin karoora qabanis warruma har’a isaani waliin dhaabbatanii har’a dhaanaafii jiraniidha.
Namni faanti, hudduun, garaan, dugdi, ciinaachi lamaanii fi harki lamaan, sammuun, ijaa fi gurri madaadhaa jiruu akkamii akka jiraatu namni hin beekne hin jiru. Ummatni Oromoo har’a sadarkaa kana irra jira. Jiruu fi jireenya akkanaa jiraachuu irra biyyee Oromiyaatti makamuu irra wayya. Mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamee moggaafame akka mootummaa Oromiyaa hin ta’in hojiin mul’atee jira. Maqama moggaafameef irrattuu mootummaa Oromiyaa kallattiin jedhanii waamuu irra mootummaa naannoo Oromiyaa jechuunuu kanuma irraa ka’ameeti.
Kan Agaazii ummata nagayatti waamee ummata ficcisiisaa jiru warra harma Tigree hodhanii guddataniidha. Mataa qabatanii ummata dhumeef boohuun mootummaa nama hin taasisu. Mootumaa kan nama taasisu humna ummata boochisu boochisuu, kan ummata fixe fixuu, kan ummata buqqise ummata isaa buqqisuu, kan ummata namaa hiyyoomse ummata isaa hiyyoomsuun ummata ofii dura bu’anii bakka ummata ofii hadhaa bifa kamuu dhadhanuudha. Ummatni mootummaa quuqama isaaf hin qabne duuka deemu ykn hordofu hin jiru. Oromoon kana beekee jira. Sababaan mootummaan Tigree isaan lafa irraa hobbaasuuf kanaaf. Kan funyaan butee ummata ficcisiisu ammoo warra jechoota gurra Oromootti mi’aawan miidiyaalee isaanii irratti dhangalaasan akka ta’e beekkamaadha.
Humna hin qaban, beekkomsa hin qaban, onnee hin qaban, abdii of irratti hin qaban, kan isaan qaban arraba damma dibatee fi imimmaan sobaa dhangalaasuudha. Mootummaa du’ee afaan boollaa irra ciisu awwaaluu fi awwaalchisuu dhiisanii afaan boollaa irraa gara galma jireenyaatti harkisaa fi harkisiisaa jiran. Ummatni Oromoo qalbii tokkoon sadarkaa tokko irratti rakkoo kana hubachuu qaba. Hubachuu qofa osoo hin taane mala malachuu qaba. Kan duraa ummatni jiruu fi jireenya isaa irraa buqqa’e namni kuma dhibba jahaa olii kun taa’ee harka diinaa eeguu ykn kajeeluu irra dirree falmaatti bahuu qaba. Ummatni miiliyoona jahaatamaa olii isaan duubaan hiriiruu qaba. Oromoon bakka tokko, yeroo tokko wal quba qabeenyaan yoo ka’e mootummaa Tigree liqimsuuf sekondii tokko itti hin fudhatu.
Tigreen ummata keenya amma fixaa jirtuu fi lammiin lammii isaanii ficcisiisaa jiranii fi warri gara fuula duraaf sagantaa fakkaataa kana qabanis asii achi ummata kana balleessuu akka hin dandeenye hubatanii hojii ittiin of balleessan kana irraa of qabuu qabu. Ajjeesuu fi ajjeefamuun gootummaa fi dabummaa nama hin badhaasu. Gootummaa fi hayyummaa kan nama badhaasu nagayaa fi fayyaa biyyaa fi ummata keessatti dagaagsuudha. Biyyaa fi ummata nagayaa fi fayyaa hin qabne ni bulchina jedhanii himachuun qaaniidha. Tigree fi dhaabbileen ilmaan isiis asii achi hireen ummata biyya kanaa bulchuuf qaban dhumaatee jira. Biyyootaa fi ummattoota impaayera Itophiyaa jala jiran hundaaf dawaan fayyisu walabummaa fi bilisummaa qofa akka ta’e beekkamaadha. Maqaa tokkoon ummata tokko ta’anii jiraachuuf dura dursee hireen kun gadi bu’ee lafa irratti mirkanaawuun barbaachisaadha.
Furmaata hundee kana fiduuf dura ummatni Oromoo galii isaa bira gahuun dhuunfachuudha. Kana dura dhaabbachuuf humni yaalu kamuu itti milkaawuu akka hin dandeenye gamanumaan beekuu qabu. Firaa fi diinni Oromoo mul’ata kana hoongessuuf carraaqu aduun itti dhiitee jirti. Bakka bulu qofa osoo hin taane bakka oolus amuma irraa barbaadachuu qabu.
Oromoon bilisoomuun Oromiyaan walaboomuun aduu ykn ji’a ba’ee ifaa jiru. Ifa kana asii achi dhaamsuu kan danda’u akka hin jirre beekkamuu qaba. Gumaan dhala Oromoo dhumaa ture, dhumaa jiru, dhumuuf jiraatuu gumaan lubbuu isaanii Oromiyaa fi Oromummaa dhugoomsuu qofaadha!
RSWO – Muddee 14,2017 ,ODUU ,QOPHII ADDAA FI DHAAMSA